Iprofayile yekhampani - Qiangzhong Machinery Technology Co., Ltd.
Wenzhou Qiangzhong Machinery Technology Co., Ltd.kuyinto umenzi ngobuchule izixhobo ulwelo, kuquka High Shear Emulsifiers, Stainless Ukuxubana Tank, Colloid Mill, Sanitary neeMpompo, Ucoceko lokucoca ulwelo, ukuvaleka mgodi, High Precision Sanitary Valve neZilinganisi, njalo njalo. esetyenziswa ngokubanzi kumashishini anje ngotywala, iimveliso zobisi, iziselo, iikhemikhali, izithambiso, amayeza, i-bio-pharmaceuticals, kunye nokunye. Sikwabonelela ngeeseti ezigcweleyo zenkonzo ukusuka ekuyileni yonke imibhobho, ubunjineli, ukufakela kulondolozo, konke ngokuhambelana ne-GMP, QS, kunye ne-HACCP.
Ngobuchwephesha obuphambili kunye nezixhobo zemveliso, ukuhlangabezana ngokungqongqo nemigangatho yeshishini, kunye nokulawulwa kweenkqubo ezipheleleyo, umgangatho wethu uphuhliswe kakuhle ngokuqhubekayo. Kude kube ngoku, iimveliso sele zithengisiwe ngeenxa zonke e-China kwaye zithunyelwa kwilizwe jikelele, ezinje nge-Yurophu, iMelika, uMzantsi-mpuma weAsia, uMbindi Mpuma, njl. Ngelixa singasoze siyeke, ngokuchaseneyo siza kuphucula umgangatho wemveliso ukwenza ukuba iQiangzhong ibe liqabane elithembakeleyo labathengi basekhaya nakwamanye amazwe ngenkqubo yolawulo oluphambili kunye nenkonzo yokuqala.
I-Qiangzhong iya kwenza iinzame ezilungileyo zokufumana ubuchwephesha obuphambili, ifumane iingcali ezikumgangatho ophezulu kwaye yomeleze ulawulo lwangaphakathi ukwandisa amaqela ethu ukuze sinikezele ngeemveliso ezigqwesileyo kunye nenkonzo engcono enesimo sengqondo esihle, sithathe inxaxheba kukhuphiswano lwehlabathi.
Uphawu lwentengiso "Qiangzhong" kukuzibophelela kwethu kubathengi, okuphumelele ukuthembela kwabo badumileyo, kwaye ngesibindi siya kuya phambili ukuze sibalasele.